I-MEDIA - Sven Luca Umhlaba
09.06.20/XNUMX/XNUMX - Umeluleki we-Cruise - Germany
Omunye wamaJalimane ahanjwa kakhulu uyeluleka: "Akufanele silahlekelwe yithemba lethu!"
06.11.19/XNUMX/XNUMX - Märkische Allgemeine - eJalimane
Eminyakeni engama-30 ngemuva kokuwa kodonga, lo "Ossi" ugcwalisa iphupho
25.03.19/XNUMX/XNUMX - GO - Estonia
SVEN LUCA: 7 aastat yebo 193 maad
12.01.18/XNUMX/XNUMX - Märkische Allgemeine - eJalimane
23.10.18/XNUMX/XNUMX - INomadmania - Umhlaba
ISven Luca manje isinamazwe ayi-11 asele ukuqedela uhlu lwe-UN; usithatha ohambweni lomuntu siqu lokuthi kungani ethathe isinqumo sokuhambela wonke amazwe emhlabeni.
Sven Luca, ake usitshele kancane ngemvelaphi yakho nokuthi uthando lwakho lokuvakasha lukhule kanjani.
Igama lami nginguSven D., kepha ngisebenzisa igama lami lomculi noma igama lomgunyathi uSven Luca yonke indawo. Ngakhulela eHavelland ngaseBerlin ezweni elaliyiMpumalanga Jalimane. Ngaphambi kuka-1989 ebuntwaneni bami ngangike ngaba nabazali bami izikhathi eziningi ePoland, eCzech Republic naseHungary. Lawa kwakungamazwe amathathu kuphela lapho uhlelo lwethu lobusoshiyali lusivumele ukuthi sihambele ngaphandle kwezinkinga noma ikhanda. Ngemuva kokuhlanganiswa kweJalimane ngo-3, ngaqala ukuhamba njalo ezinyangeni eziyi-1990-3 nomngane wami owayesebenza enkampanini yezokuvakasha futhi wayehlala efuna umlingani wezokuvakasha. Ohambweni lwethu lokuqala saya eTunisia kwalandela i-USA, iBali, iNingizimu Afrika, iDominican Republic nezindawo eziningi eziseYurophu.
Uzama ukufika kuwo wonke amazwe… yini ekugqugquzelayo ukuthi wenze lokhu? Futhi iyiphi inselelo yakho enkulu ukufeza lokhu?
Yebo, ngizama ukuvakashela wonke amazwe emhlabeni futhi kubonakala sengathi bekufanele ngabe ngikwenzile ngoFebhuwari. Lo mqondo wazalelwa esibhedlela ngoJanuwari 2012 lapho ngagula impela futhi ngabona ukuthi nganginesifo esingajwayelekile kakhulu sesikhumba (abantu abangama-200 kuphela baseGerman kwabangu-80 million). Ekugcineni, ngichithe cishe izinyanga eziyishumi ngilele esibhedlela noma ekhaya labazali bami ngemuva kokuhlinzwa kanzima okungu-10. NgoSepthemba ngaze ngafunda nokuthi ngihamba kanjani futhi ngoba ngangivele ngisembhedeni ezinyangeni ezedlule futhi yonke imisipha yami yayingakaqeqeshiwe. Kulesi sikhathi esiyizinyanga eziyi-2 bengicabanga ngempilo yami futhi lo mqondo omangazayo wokuhamba yonke indawo emhlabeni ungene emqondweni wami.Ngalesi sikhathi ngo-10 ngemuva kokusebenza impilo yami yonke ngangingenayo intombi, imali eyanele nesikhathi esiningi. Ngakho-ke ngiqale ukuhlola wonke amazwe asesibhedlela ukuthi ngakha isu yini futhi ngabhala konke phansi. Ngakha uhambo oluningi kuze kube olokugcina ngoJanuwari 2012… ngokwesibonelo ihlobo '2019: Caribbean, summer '15: West Africa, Winter '16: Australia, Winter '17: Antarctica naseNingizimu Melika njalonjalo. Manje sengiseduze nokuphela futhi ngokuthembeka eminyakeni engu-18 edlule ngenze kahle lolu hambo engilubhale phansi ngesikhathi ngisesibhedlela ngo-7. noma uma ngizobuyela kokujwayelekile ngolunye usuku ... manje ngiyaziqhenya kakhulu futhi ngiyajabula ukukufeza lokhu kungekudala.
Yini ekumangaze kakhulu ohambweni lwakho kuze kube manje?
Imvamisa angimangali ngempela ohambweni lwami ngoba ngizama ukuhlala ngililungiselele kahle izwe ngalinye. Ngifunde okuningi ngomhlaba noma ngibuka ama-documentary ku-TV .. Nginentshisekelo kukho konke vele. Kepha ngangimangele ngempilo yaseGreenland ngoba ngaphambili bengingacabangi ukuthi abantu bangahlala lapho ngokujwayelekile. Lapho eGreenland kufana nomaphi emhlabeni ojwayelekile one-inthanethi ejwayelekile, amaphathi amaningi, ukudla okumnandi, abantu abanobungane ... kumane kubanda okunegazi kakhulu isikhathi esiningi.
Sitshele izindaba ezimbalwa zokuhamba ezikwenze waba nomthelela kuwe.
Vele zonke lezi yizimo ezibucayi empilweni yami yokuhamba. Isibonelo eTokyo ngo-2015 ngathola amathonsi okukhipha kusiphuzo sami sokuqala ngemuva kokungena endaweni yokuphuzela ejwayelekile eShinjuku. Ngavuka egumbini lami lehhotela ngemuva kokulala amahora angama-20 futhi angisakhumbuli lutho. Ngivele ngabona ukuthi i-akhawunti yami yasebhange ayinalutho (cishe ngama-3.500 XNUMX USD ngaphansi), i-iPhone yami entsha sha nayo yonke imali yami yebiwe.
Ngo-Agasti 2017 ngabamba iMalaria Tropica esindayo e-Angola esikhumulweni sezindiza eLuanda ngenkathi ngilinde indiza yami eya eGermany. Leli hholo lokulinda laligcwele omiyane futhi empeleni kwakuwumbuzo wesikhathi lapho. EGermany udokotela wami wathola umkhuhlane nje ojwayelekile .. okwakuyiphutha. Ngemuva kwezinsuku eziyisishiyagalolunye ezibuhlungu ezinde, ngafika esibhedlela futhi ngqo egumbini labagula kakhulu ngoba izinso zami nesibindi sami kwase kume ukusebenza. Sengivele ngaba nezimuncagazi zikamalaleveva eziwu-9% emzimbeni wami .. i-doc ithi ngo-3,8 noma u-4,5% ngeke ngisaba nalo ithuba lokusinda. Bekusondelene impela .. ngenhlanhla yonke into ihambe kahle ekugcineni.
Ngemuva kwamasonto ayisikhombisa nje kuphela ngisindile kule malaria eshubile ngaya eMogadishu eSomalia. Ekwamukelweni kwami ​​kwehhotela ngacela ukuvakasha kwedolobha amahora angu-7-2 nomshayeli wehhotela. Kepha banginikeze lolu hambo nge-3 USD ngoba empeleni kuyingozi kakhulu ukuhamba nabantu abamhlophe futhi badinga nezinye izimvume. Kepha ngale ntengo nginqabile ngaya egumbini lami lehhotela ngenza izinto ezithile ze-Instagram. Ngemuva kwemizuzu engama-800 ngizwe ukudlidlizela okusindayo futhi ngacishe ngawela embhedeni wami… imizuzwana embalwa kamuva ukuqhuma okukhulu engingakaze ngikuzwe empilweni yami. Ebangeni nje elingamamitha ayi-30 ukusuka ehhotela lami kwaba nokuqhuma okukhulu kwebhomu emlandweni weSomalia okwabulala abantu abacishe babe ngama-800. O nkosi yami futhi ngangiseduze futhi ngabona intuthu esindayo ngenhla kwedolobha. Ngemuva kwamahora amabili ncamashi phambi kwehhotela lami ibhomu lemoto elilandelayo elinabantu abangu "450 nje" labulala abantu. Kwakuyisikhathi esibi kakhulu empilweni yami yokuhamba futhi ngangijabule ngempela ukushiya iMogadishu ngakusasa ekuseni.
Uvela eJalimane. Benza njani abantu uma ubatshela ukuthi uvelaphi? Futhi ukholelwa ezingeni elingakanani ukuthi isiko lakho linomthelela endleleni obona ngayo ukuvakasha?
Ohh umbuzo omuhle lowo .. uqinisile akulula ngaso sonke isikhathi ukuthi ngivela eJalimane. Kuya impela lapho ngiya khona futhi ngokuthembeka kwesinye isikhathi kungcono ukusho ukuthi ngivela e-Austria noma eSwitzerland. Kwenzekile e-UK noma eNetherlands kaningi lapho ngabona khona ukuthi angamukelwanga kahle njengomJalimane. Njengoba lezi zimo ngenkathi ngihamba eYurophu ngincamela ukungabi yiJalimane kepha kwenye indawo emhlabeni angikaze ngibe nezinkinga ngakho. Ngaphandle kweYurophu abantu abaningi bayawathanda amaJalimane njengoba ulunge kubo futhi. Ngicabanga ukuthi thina maJalimane singaqhosha kakhulu ngokuthola manje ipasipoti ehamba phambili emhlabeni futhi sikwazi ukungena emazweni e-177 ngaphandle kwe-visa ngaphambi kwesikhathi. Ngicabanga ukuthi isiko lethu alinalo ithonya ngenkathi sihamba kodwa ngokuqinisekile siyabona yonke indawo emhlabeni futhi ikakhulukazi emazweni ampofu ukuthi singajabula kakhulu ngokuba ngamaJalimane nokuthi sihlala kanjani ezweni lethu. Kubo bonke abantu abangaphandle kweJalimane uhlobo lwendawo yokuphupha kepha iningi labantu baseJalimane bayakuqonda lokhu lapho behambela phesheya beya e-Afrika, eMelika Ephakathi noma ezingxenyeni ezithile zase-Asia.
Impophoma Iguazu, 2018.
Manje uhlala eDubai. Yiziphi ezinye zezingqinamba zamasiko oke wabhekana nazo lapho? Noma yimaphi amagugu akhethekile afihliwe we-UAE ongawanikeza abahambi bethu?
Yebo, bengihlala eDubai kusukela ngo-2005 ngaphandle konyaka wami kuleso sibhedlela saseJalimane ngo-2012. Isiko lama-Arabhu liyinselelo enkulu. SingamaJalimane saziwa ngokuhlala isikhathi emsebenzini noma lapho kubekwa khona abantu futhi sithanda ukusebenzisa amashejuli aphelele noma ukwenziwa komsebenzi wethu. Kepha izwe lama-arab lihlukile futhi iwashi lisebenza kancane. I-UAE izwe elinamasiko amaningi elinabantu bokufika abacishe babe ngama-85% kepha ekugcineni lisebenza kahle. Wonke umuntu unendima yakhe ehlukile kulolu hlelo futhi wonke umuntu uzinikele kuleli lizwe yedwa. Kungakho imisebenzi yayo ekugcineni ngoba bonke abantu bajabule lapho. Kwesinye isikhathi ikakhulukazi i-Dubai izwa njengomndeni owodwa nge-expats ezivela kuwo wonke umhlaba.
Usebenza kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Uchitha isikhathi esingakanani kulokhu? Ucabanga ukuthi lokhu kwenza noma kususe kude kangakanani ekuhambeni kokuhamba? Ingabe kunezinto eziningi ongazihlanganyeli nabalandeli bakho?
Ngokwethembeka, i-Instagram yami ithatha okungenani amahora ama-2-3 osuku lwami futhi ngizama ukunikeza abalandeli bami ukubonakala okuningi ngangokunokwenzeka ohambweni lwami. Khonamanjalo ngithole abantu abaningi abahle noma abangani ku-Instagram futhi angifuni ukukugeja bese ngizama ukuhlanganyela konke nabo ngaphandle kwezinto eziyimfihlo. KuFacebook ikakhulu laba ngabangani bami bangempela empilweni futhi okungenani ngibazisa ukuthi ngikuphi emhlabeni ngezithombe ezimbalwa zansuku zonke. Khonamanjalo i-Instagram, i-Facebook noma i-Snapchat ziyingxenye yendlela yesimanje yokuhamba ngoba umhambi uthatha izithombe namavidiyo noma kunjalo ohambweni lwakhe. Eminyakeni eyi-10 eyedlule izithombe zazenzelwe nje umndeni nabangane ngemuva kokufika ekhaya lapho ukuphela kweholide futhi manje kungenzeka ukuwabelana nawo wonke umuntu ngasikhathi sinye lapho kwenzeka ...
Yini oyithola ibalulekile ukuphatha nawe ohambweni?
Ngihlala ngiphatha amaPasipoti amaJalimane ama-3 (aphume kwayi-4) nami .. uma kungenzeka. Okubaluleke kakhulu amabhange kagesi aqinile ama-2, izingcingo ezi-2 ezinekhamera enhle, imali eyanele kanye nekhemisi elihhafu 🙂
Manje-ke yimaphi amazwe olindele ukuwavakashela ezinyangeni ezimbalwa ezizayo?
Ngisanda kuvakashela iDamaseku okwakujabulisa kakhulu! Ngisadinga ukwenza iLibya neYemen ngaphambi kokuthi ngenze amazwe ami okugcina nezindawo ezimbalwa ngoJanuwari nangoFebhuwari ngeziqhingi ezithile zasePacific. Ngemuva kwalokho ku-2019, ngicabanga ukuthi ngizozama ukuqeda izindawo ezimbalwa zokugcina kanye namazwe e-UN + eTCC naseNomadmania ngaphambi kokuthi ngicabange ngeNingizimu neNyakatho Pole.
Ekugcineni, umbuzo wethu wesiginesha - uma ungamema noma yibaphi abantu abane kusuka kunoma isiphi isikhathi emlandweni esidlweni sakusihlwa, ngubani ozoba ohlwini lwakho lwezivakashi futhi ngani?
Okokuqala, bengizomema uNapoleon Bonaparte ngoba bengiseSaint Helena kuleli hlobo eNdlwini yakhe yokudingiswa eLongwood nasethuneni lakhe futhi bekujabulisa ngempela ukufunda ngempilo yakhe. Njengokwesibili, ngithanda ukuhlala eduze kukaCleopatra VII.Umbusi wokugcina woMbuso WamaPtolemy waseGibhithe. Wayelwa neRoma enkulu ngaphandle kwengozi. Umuntu wami wesithathu kungaba u-Ibn Battuta odumile ngoba uhambe amakhilomitha ayi-120.000 eminyakeni engama-30 ezungeza umhlaba wama-arab .. okumangazayo nje. Umuntu wokugcina engingathanda ukumumema esidlweni sakusihlwa usaphila .. ngifisa ukuhlangana noMichael Schumacher inganekwane yeFormula 1 etafuleni lami kodwa ngithole ngokugcwele esimweni esinempilo futhi esifanele. Kuyadabukisa impela ukungazizwa izindaba ezimnandi kusukela engozini yakhe embi ye-ski cishe eminyakeni eyi-5 edlule manje futhi ngifisa ukuthi angabuya ngelinye ilanga.
Izithombe ezikule ngxoxo zivela eqoqweni likaSven Luca futhi siyambonga ngokuhlanganyela nathi ku NomadMania!
Nginguye USven Luca, ongomunye wabantu abahamba kakhulu emhlabeni futhi oyilungu leTravelers Hall of Fame e-Auckland. Kusukela ngoMashi 08th, 2019 ngiseqenjini elikhethiwe labantu abangama-28 kuphela kule planethi abavakashele izwe ngalinye emhlabeni. Lokhu akugcini ngokubandakanya i-UN ye-193 ukuthi ngiyiqambe ngokuthi iSamoa ngoFebhuwari 03, 2019 njengo-196.
Thola izindaba ezimayelana nami
Ukuhamba nge-imeyili !!